IPL2021 - အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းများ
IPL 2021 အသင်းများ
အသင်းအားလုံးသည် ၂၀၂၁ အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ်တွင်ကောင်းမွန်သောကစားသမားအချို့ကိုကောင်းမွန်စွာချိန်ခွင်လျှာညှိလိုကြသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်လေလံတင်ပြီးနောက် IPL အသင်း ၈ သင်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ်လေလံတင်ရောင်းချမှုသည်အတော်လေးစွဲမှတ်သွားသည်။ လေလံတင်စဉ်အတွင်းအဖြစ်အပျက်များအများအပြားရှိခဲ့သည်။ Glenn Maxwell, Chris Morris စသည့်နာမည်ကြီးကစားသမားများကို ၀ ယ်ရန် INR များစွာကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။
ပြည်နယ်သည် Karnataka ကိုကိုယ်စားပြုသောဘန်ဂလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်တော်ဝင်စိန်ခေါ်သူများဘန်ဂလိုဖြစ်သည်။ အဆိုပါအသင်းသည်အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ်၏ထိပ်တန်းနေရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့် ...
Kolkata Knight Riders သည် ၂၀၂၁ တွင် IPL အစီအစဉ်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးအနိုင်ရရှိပြီး ၃ သင်းဖြင့်ကလပ်ရှိအခြားအသင်းနှစ်သင်းနှင့်ပါဝင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်နောက်ဆုံးစတင်စွမ်းဆောင်ရည်အများကြီးပြသခဲ့သည် ...
ဓမ္မရာဇဝင် IX ပန်ဂျပ်တစ် ဦး ပြည့်စုံ
ရှငျဘုရငျ IX ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်သည်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်လိဂ်ရှိပန်ဂျပ်ပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုပြီး Mohali အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ပြိုင်ပွဲအတွင်းရှိအသင်းတိုင်းနှင့်ပရိတ်သတ်အကြိုက်ဆုံးအသင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ Chennai Super Kings ၏အသေးစိတ်စိစစ်မှု
Chennai Super Kings သည်ချန်နိုင်းအခြေစိုက်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ်တွင်တမီးလ်နာဒူး၏ပြည်နယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အသင်း၏မူလနေရာဖြစ်သော Chidambaram အားကစားကွင်းသည်ချင်နိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ အဖွဲ့ ...
Rajasthan Royals - ဤ IPL အဖွဲ့အကြောင်းအသေးစိတ်သုံးသပ်ခြင်း!
Rajasthan Royals သည်အိန္ဒိယထိပ်တန်းလိဂ်တွင်စတင်နေပြီဖြစ်သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာမှာပင်အချို့သော IPL ရာသီများတွင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော်လည်းစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ...
Sunrisers Hyderabad - IPL အဖွဲ့အကြောင်းရှင်းပြထားသောရှင်းလင်းချက်
IPL ပွဲများနှင့်ဆုဖလားများ - Sunrisers Hyderabad ကိုအနိုင်ယူနိုင်ရန်အတွက်အထူးပြုခြင်းနှင့်မီးတွင်းရှိအဖွဲ့သည်။ SRH သည်အလွန်စွမ်းရည်ရှိသောကြောင့် IPL သမိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးအသင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒေလီမြို့တော် - ဤ IPL အဖွဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောအသေးစိတ်သုံးသပ်ချက်!
ဒေလီမြို့တော်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသော IPL အဖွဲ့များတွင်ပါဝင်သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်ဒေလီ franchise အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်လိဂ်အတွက်ရှေ့ဆက်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့branded ...
မွန်ဘိုင်းအင်ဒီးယန်းအသင်းသည် IPL ၏သမိုင်းတွင်၎င်း၏အမည်ကိုရွှေစကားလုံးဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့သည် IPL 2021 အတွက်နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတစ်ခုထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်လုံးဝအဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
၁၃ ကြိမ်မြောက် IPL ရာသီသည်အချိန်ကုန်ဆုံးအချိန်ကုန်ဆုံးရာသီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသင်းတိုင်းနီးပါးမှတ်တမ်းများရရှိခဲ့သည်။ IPL 2020 ရာသီအားအိပ်မက်အားကစားပြိုင်ပွဲ ၁၁ ခုမှကမကထပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ခေါင်းစဉ် ...